Fambolen-kazo : “Laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana” -
AccueilRaharaham-pirenenaFambolen-kazo : “Laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana”
Hampitomboina 40 000 hekitara isan-taona ny velaran-tany voavoly hazo, raha ny fanamby napetraky ny minisiteran’ny Tontolo iainana. Zava-dehibe tokoa mantsy ny fambolen-kazo satria dia iankinan’ny fiainan’ny zanak’olombelona iray manontolo. Izany indrindra no anton’ny hanamarihana isan-taona ny taom-pambolen-kazo. Tany Moramanga, tao amin’ny fokontany Analatsara kaomina Ambohibary, no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo taona 2017 -02018 ny sabotsy teo. Zana-kazo kesika miisa 1 700 sy kininina safiotra miisa 700 novolena tamina velaran-tany 20 hekitara no voavoly tamin’io sabotsy io. Tsy hijanona eo amin’ny fambolena azy fotsiny moa ny zana-kazo fa tsy maintsy arahi-maso mandra-palehibeany ho azo trandrahana sy azo ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro.
Nambaran’ny praiminisitra Mahafaly Olivier, izay nisolo tena ny filoham-pirenena tamin’io hetsika io fa “ tokony ho adidin’ny Malagasy rehetra mihitsy ny manao fambolen-kazo, ary laharam-pahamehan’ny fanjakana rahateo izany, mba hisorohana ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro”.
Tetsy ankilan’izay dia nanamafy ihany koa ny minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Haivoary ary ny Ala, Ndahimananjara Johanita, izay nitarika ny ekipa teo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana tamin’ny fanokafana ny fotoam-pambolen-kazo tany Moramanga ity fa “ tsy hijanona fotsiny amin’ny fambolen-kazo akory ny hetsika fa hisy mihitsy ny fanaraha-maso an’ireo zana-kazo ireo mba ho vanona. Ezahina ampitomboana ihany koa ny velaran-tany voavoly hazo isan-taona. Efa nahatratra 25 000 hekitara moa ny velaran-tany voavoly hazo tamin’ny taom-pambolen-kazo 2016 – 2017 iny ”.
Leo korontana, izahay, hoy ny fanambaran’ny solontenan’ny vahoakan’Antsohihy, omaly, momba ny toe-java-nisy tany an-toerana. Misy andian’olona mampirisika avy hatrany hikorontana mantsy raha vao nisy an’iny trangana fanafihana Mompera iny. “ Gaga izahay fa ny fisavorovoroana ...Tohiny